व्रत किन बस्ने ? के छन् यसका फाईदा ? कसले व्रत नबस्ने ? व्रत किन बस्ने ? के छन् यसका फाईदा ? कसले व्रत नबस्ने ?
व्रत किन बस्ने ? के छन् यसका फाईदा ? कसले व्रत नबस्ने ?
प्रकाशकराष्ट्रिय टाईम्स — 8/21/2020 04:43:00 pm 0
नेपाल व्रत र चाडहरूको देश हो। यहाँ व्रतको प्रचलन प्राचीन कालदेखि नै चल्दै आएको छ। व्रतको धार्मिक महत्त्व छ, साथै यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई ठूलो फाइदा पनि पुर्‍याउँछ। नवरात्रि, तीज , एकादशी आदिको जस्तै देशका सबै चाड़हरूमा व्रत राखेर मानिसहरूले भगवानप्रति आफ्नो भक्ति देखाउँछन्।
हाम्रो शरीरको सबै समस्याहरू पनि यी व्रतहरूले पार गर्दछन्। खाना नियन्त्रण गरेर छिटो र शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुधार गर्न सकिन्छ। यसले तपाईंको आयु बढाउँदछ र रोगहरूको जोखिम कम गर्दछ। सबै डाक्टरहरूले हप्तामा एक पटक व्रत बस्न पनि सल्लाह दिन्छन्। आज हामी तपाईंलाई बताउनेछौं व्रत राखेर हाम्रो शरीरलाई के फाइदा हुन्छ।
रोग प्रतिरोधी प्रणाली मजबूत बनाउछ - व्रत राख्दा, शरीर को प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत हुन्छ । यस कारणले गर्दा शरीरसँग रोगहरूसँग लड्न सक्ने क्षमता बढ्छ। त्यस्तै , न्यूरोलोजिया, कोलाइटिस, थकान, कब्जियत र टाउको दुख्ने खतरा धेरै कम हुन्छ।
पाचन प्रणालीको लागि उत्तम - व्रतले हाम्रो पाचन प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ। कम्तिमा तीन पटक एक महिनामा व्रत राख्नुले हाम्रो पाचन सुधार गर्दछ। व्रतको बेला, हाम्रो पेट र कलेजोले धेरै आराम पाउँछ।
मेमोरी / स्मरण शक्ति बढ्छ - व्रत पनि तपाइँको दिमागी क्षमता बृद्धि गर्न धेरै प्रभावकारी छ। यदि तपाईंसँग राम्रो खाना छ र हप्तामा एक पटक व्रत राख्नुभयो भने यसले तपाईंको सोच्ने क्षमता र मेमोरीमा वृद्धि गर्दछ। यस बाहेक, हाम्रो मस्तिष्कमा ब्रेन डेरिवेड न्यूरोट्रोफिक फ्याक्टर (BDNF) नामको प्रोटीन पर्याप्त मात्रामा बढ्छ। यस प्रोटीनले हाम्रो मस्तिष्कको कार्य नियन्त्रण गर्दछ। यसले दिमागलाई शान्त र स्वस्थ राख्छ।
वजन घटाउने - व्रत बस्नको लागि राम्रो विकल्प हो, जसले वजन कम गर्न चाहान्छन्। व्रतले शरीरमा बोसो कम गर्न मद्दत गर्दछ। जो अधिक खाना खानको भक्त छन्, तिनीहरू व्रत बस्नै पर्छ। व्रतले भोकलाई पनि नियन्त्रणमा राख्छ, जसले गर्दा तौल घटाउने सम्भावना बढ्छ ।
डिप्रेसन कम गर्छ - मानसिक शान्तिको लागि व्रत उत्तम विकल्प हो। यसले तनाव, चिन्ता र उदासिनता रोक्न सक्छ। व्रतले दिमागलाई शान्त राख्छ र हाम्रो इच्छाशक्तिलाई सुदृढ बनाउँछ ।
तर, अशक्त व्यक्ति, सुतकेरि महिला , मधुमेह का बिरामी , रक्तचाप का बिरामी , महिनावारी भएका महिला तथा अन्य कमजोर व्यक्तिहरुले भने व्रत बस्नु अघि निकै शावधानी अपनाउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्षकको सल्लाह लिएर मात्र व्रत बस्ने नबस्ने निर्णय गर्नुपर्छ ।
लेबल : बाल संसार शिक्षा र स्वास्थ्य